Saddex qof oo ku dhimatay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay banaanka saldhiga Turkiga ee Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSaddex qof oo ku dhimatay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay banaanka saldhiga Turkiga ee Muqdisho
Saddex qof oo ku dhimatay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay banaanka saldhiga Turkiga ee Muqdisho
June 23, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Saldhiga ayaa tababar lagu siiyaa ciidanka Soomaaliya. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho maanta oo Talaado ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka.
Qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay banaanka saldhiga Turkiga ee Muqdisho kadib markii ilaalada goobta joogtay ay u diideen in uu galo gudaha.
Dadka geeriyooday ayaa waxaa kamid ah qof rabay in uu iska qoro saldhiga Turkiga, iyo qof meesha marayay, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Saldhiga Turkiga ee Muqdisho, oo la furay sanadkii 2017, ayaa lagu tababaraa ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Deni: Somaliland waa in ay dhammaan deegaanada Sool iyo Sanaag uga baxaan si nabadgelyo ah
Madaxweyne Farmaajo oo ku casumay madaxweynayaasha maamul goboleedyada shir ka dhici doona Muqdisho bisha soo socota
20 kiis oo cusub oo coronavirus ah oo laga helay Soomaaliya, iyo dhimashada oo gaartay shan qof
Muqdisho-(Puntland Mirror) 20 kiis oo cusub oo coronavirus ah ayaa laga helay Soomaaliya 24 saac ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in saddex qof ay xanuunka u [...]
If you are to speak to Puntland Mirror, please contact us the following ways: Email: info@puntlandmirror.net or puntlandmirror@gmail.com Telephone: +252907794517, +252907593839 & +252906149730. We welcome your comments and suggestions. Related PostsJanuary 10, 2017 Sargaal sare oo ka tirsan [...]
Taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo shaqo joojin ku sameeyay taliyaha booliiska qeybta gobolka Mudug
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Taliyaha booliiska qeybta gobolka Mudug Cusmaan Xasan Cowke ayaa waxaa shaqo joojin ku sameeyay taliyaha ciidamada booliiska Puntland Cabdiqaadir Shire Faarax. Wareysi uu siiyay idaacada maxaliga ah ee Radio Daljir, Cowke ayaa sheegay [...]